मैले देखेको कथा
युथ रिपोर्टर शिलापत्रडटकमले सुरु गरेको युवालक्षित स्तम्भ हो । यो स्तम्भमा दूरदराजमा रहेर सामाजिक जागरण र समाज रुपान्तरणमा भूमिका खेलिरहेका युवावर्गका सूचना संकलन सीप, लेखन कला र सिर्जनात्मक क्षमतालाई प्रोत्साहन गरी उनीहरूका अंकुराउँदै गरेका सिर्जनात्मक चेतलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका सामग्री प्रकाशन गर्नेछौँ । यो अभियानमा जोडिएर सहकार्य गर्न शिलापत्रडटकम आह्वान गर्दछ । (सं.)
कथा आफैँमा रोचक हुन्छ । सबैलाई सुनौँ-सुनौँ लाग्ने हुन्छ । कति कथा काल्पनिक हुन्छन् भने कति कथा कसैको जीवनका यथार्थ घटनालाई शब्दको माला उनेर बनाइएका हुन्छन् । कथाहरूबाटै कसैको संघर्षका बारेमा जानकारी पाउने गर्छौं ।कथाहरूबाटै हामीलाई मनोरञ्जन मात्र नभएर प्रेरणा पनि पाउने गर्छाैं । त्यसैले साथीहरू, आज म आफैँले दखेको कथा यहाँहरूलाई सुनाउँछु ।
कैलाली जिल्लामा जन्मिएकी सीता परिवारको पहिलो सन्तान थिइन् । गरिबीको रेखामुनि रहेको त्याे परिवारले चार जनालाई पनि राम्रोसँग खान र लाउन दिन सकेको थिएन । घरको जेठी छोरी भएकै नाताले उनले सानैदेखि आमाबाबुलाई काममा सघाउने गर्थिन् । दयालु स्वभावकी उनले सानै उमेरमा बुबा गुमाइन् । बुबाको मृत्युपछि त उनी नै घरको पहिलो खम्बा बन्नुपर्‍याे ।
गर्भमै टुहुरो भएको उनको कान्छो भाइ र दुई बहिनीका साथै घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीमाथि आइपर्‍यो । सीता पढाइ छोडेर गाउँकै जमिनदारकोमा काम गर्न थालिन् । उनलाई त्यहाँ विभिन्न बहानामा कुटपिट गरिन्थ्यो । उनी ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भनेजस्तै भएकी थिइन् ।
सामाजिक सञ्जालमा मेरो अनुभव
एक दिन अचानक हस्याङफस्याङ गर्दै सीताकी आमा सीतालाई घर लैजान जमिनदारको घर आइपुगिन् । घर छोडेको ३ वर्षपछि आमालाई देख्दा खुसी भएकी सीता घर जान पाउने भएपछि झन् फुरुक्कै भइन् ।
घर पुगेपछि सीताको खुसी खुसी बनेर बाँचिरहन पाएन । बल्लो पो थाहा पाइन् आमा आफूलाई लिन आउनुको कारण । घरमा उनको विवाहको पक्कापक्की भइसकेछ । अनेक अनुनय विनय गर्दा पनि बिहे भएर माइतिघर छाड्नै पर्‍याे ।
तर उनले बिहे गर्नुअगाडि आफ्नो आमा, भाइबहिनीलाई पाल्नुपर्छ भन्ने वाचा खुवाएर मात्र बिहे गरिन् । उनको श्रीमान्‌ले पनि सीताको वाचा पूरा गरे । उनले पहिलो सन्तान छोरी जन्माउँदा सबै जना खुसी नै थिए तर उनकी सासूआमा नाति होस् भन्ने आशामा थिइन् ।
त्यसैले सीताले धेरै पटककाे गर्भ छाेरी रहेकाे पत्ता लागेपछि फालिदिन बाध्य बनेकी थिइन् । पाँचाैँ पटकसम्मकाे गर्भ जचाउँदा छोरी भए देखिपछि सासूले उनलाई नै दोष दिने गरेकी थिइन् । त्यति मात्र हाेइन, विभिन्न हिंसात्मक क्रियाकलापसमेत सीतामाथि हुँदै आएको रहेछ ।
निर्मला दिदीको निमा डेरी
सीतालाई श्रीमान्‌काे राम्राे साथ थियो । त्यो पनि पछि विस्तारै गुमाउँदै गइन् । उनको श्रीमान् छिमेकी देश भारतमा काम गर्न जान्थे । श्रीमान् भारत गएको समयमा अन्तै लागेकाे भन्दै उनको चरित्रमाथि विभिन्न आरोप लगाइन्थ्यो । उनका श्रीमान्‌लाई सासूआमा र आमाजूदिदीले यस्तै नराम्रा कुराहरूकाे पाेल सुनाएर उनीबाट टाढा बनाएका थिए ।
श्रीमान् भारतबाट फर्किएपछि सासू र आमाजूदिदीको कुरा सुनेर श्रीमान्‌ले सीतामाथि विभिन्न हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नुका साथै घाँटी थिचेर मार्नेसम्म प्रयत्न गरे ।
भोलिपल्ट उनले सबै गाउँलेलाई बोलाएर यो कुराहरू भनिन् । तर, उनका श्रीमान्‌ले 'आफ्नो भाइबहिनीको माया छ भने यो सबै झुटो हो भन्' भनी उनलाई दबाब दिए । तर उनले निडर भई सबै साँचो कुरा भनिन् ।
ए छोरी पो !
महिलालाई कमजोर र लाचार सम्झिने यो समाजमा कसले उसको पीडा बुझ्थ्यो र ! उल्टै उसलाई नै दोषी ठहर्‍याइयो । अबदेखि यस्तो नगर्ने भनी मिलापत्र गराइयो । छोराको आशा बोकेको सीताको परिवारले धामीझाँक्रीलाई देखाउन थाले ।
त्यहाँ पनि सीतालाई नै दोषी देखाएर अब अर्को बिहे गर्नुपर्छ भनी सल्लाह दिइयो । उनले छोरा नजन्मिनुमा मेरो होइन, श्रीमान्‌काे दोष छ भन्दा पनि उनको परिवारले मानेन । अन्तत: परिवारले सीतालाई डिभोर्सका लागि दिनदिनै दबाब दिन थाल्याे ।
सीताले डिभोर्स दिन नमानेपछि उनलाई चोरीको आरोपमा घरनिकाला गरियो । उनलाई जग्गा बेचेको २ लाख रुपैयाँ र २ तोला सुन चोरेकाे आरोपमा जेल चलान गरियो । यो कुरा उनकी बहिनीमार्फत एक महिला अधिकारकर्मीसामु पुगेछ ।
त्यसपछि ती महिला अधिकारकर्मीले यससम्बन्धी गोप्य अनुसन्धान गरिन् र यो सबै आरोप झुट हो, छोरा नजन्माएको भनी घर निकाला गर्ने एउटा बहाना मात्र हो भनी प्रमाणित गर्न सफल भइन् ।
अनि म गलत मान्छेको शिकार हुनबाट बचेँ...
अहिले उनका श्रीमान्, सासूआमा र आमाजूदिदीमाथि कानुनी कारबाही गरियाे र सीता रिहा भएकी छन् ।उनी अहिले सिलाइ कटाइ गरी आफ्नी छोरीलाई क्याम्पसमा पढाइरहेकी छन् ।
कथा यत्ति नै हो साथीहरू । सीताले त आफ्नो अधिकार खोजेर जीवन खुसीसाथ बिताइन् भने तपाईंहरूमाथि पनि हिंसा भइरहेको छ भने सहेर नबस्नुस् है ! संसार धेरै ठूलो छ । यहाँ खुसीसाथ आफ्नो जीवन आफूले चाहे जसरी बिताउन सकिन्छ । मात्र तपाईंले हिंसा नसहने अठोट गरेर हिम्मतका साथ काम गर्नुपर्‍याे ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज १८, २०७७, २२:०६:००